ပရိသတ်တွေ ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံး Romantic-Comedy ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၅ ကား | News Bar Myanmar
ပရိသတ်တွေ ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံး Romantic-Comedy ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၅ ကား
အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေဟာ အများအပြားထွက်ရှိထားတာကြောင့်ပဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိက်ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ။ သိပ်မကြာသေးခင်က Ranker ဆိုတဲ့ Website တစ်ခုကနေ ပရိသတ်တွေအကြိုက်ဆုံးသော အချစ်ဟာသကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ရွေးချယ်မဲပေးစေခဲ့ပြီး စာရင်းပြုစုခဲ့ပါတယ်။ အောက်​မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း (ကြီးစဥ်ငယ်လိုက်) စာရင်းကတော့ ပရိသတ်တွေရွေးချယ်မဲပေးခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံး အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၅ ကားပါပဲ။
15. Touch Your Heart (Yoo In Na & Lee Dong Wook)
၂၀၁၉ တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးနဲ့ ရေခဲတုံးစရိုက်ရှိတဲ့ နာမည်ရရှေ့နေကြားက ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
14. W: Two Worlds (Lee Jong Suk & Han Hyo Joo)
၂၀၁၆ တုန်းကထွက်ခဲ့ပြီး W လို့ နာမည်ရတဲ့ Wetoon ထဲကဇာတ်ကောင် လူချမ်းသာလေးနဲ့ Webtoon ကို ဖန်တီးခဲ့သူရဲ့ သမီး – ဆရာဝန်မလေးကြားက စိတ်ကူးယဥ်အချစ်ဇာတ်လမ်းပါပဲ။
13. Hotel del Luna (IU & Yeo Jin Goo)
၂၀၁၉ တုန်းကမှထွက်ရှိထားပြီး.. သေပြီးနောက် တမလွန်မသွားခင် ဝိဉာဥ်တွေနေထိုင်ဖို့ ဖန်တ​ီးထားတဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် မသေမျိုးမိန်းမလှလေးနဲ့ လူသား.မန်​နေဂျာကောင်လေးကြားက အချစ်ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
12. Suspicious Partner (Ji Chang Wook & Nam Ji Hyun)
၂၀၁၇ တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ အမှုစစ်တစ်ဦးနဲ့ လူသတ်တရားခံအဖြစ်မှားယွင်းစွပ်စွဲခံလိုက်ရတဲ့ ရှေ့နေမိန်းကလေးကြားက ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး စိတ်တ္တဇလူသတ်သမားတွေရဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတွေကို အတူတူဖြေရှင်းကြရင်း ဟာသကော အချစ်ပါရောနှောပါဝင်နေတဲ့ဇာတ်ညွှန်းကြောင့် လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။
11. I Am NotaRobot (Yoo Seung Ho, Chae Soo Bin & Um Ki Joon)
၂၀၁၇-၁၈ တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး လူသားအာလက်ဂျစ်ရှိတာကြောင့် စက်ပစ္စည်းနဲ့ စက်ရုပ်တွေကိုသာ အဖော်ပြုနေရတဲ့ သူဋ္ဌေးသား၊ စက်ရုပ်တီထွင်တဲ့ပါရဂူနဲ့ တီထွင်ထားတဲ့စက်ရုပ်ပျက်ဆီးသွားတာကြောင့် စက်ရုပ်ပုံစံဟန်ဆောင်ကာ သူဋ္ဌေးသားဆီကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
10. True Beauty (Moon Ga Young, Cha Eun Woo, Hwang In Youp & Park Yoo Na)
၂၀၂၀-၂၁ မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ လူငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး ရုပ်ဆိုးတာကြောင့် နှိမ်ချပြောဆိုဆက်ဆံခံရတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူလေးဟာ မိတ်ကပ်အစွမ်းနဲ့ နတ်သမီးတမျှလှပသူလေးအဖြစ် ပြောင်းလဲနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက် စရိုက်မတူတဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ)
9. It’s Okay to Not Be Okay (Kim Soo Hyun & Seo Yea Ji)
၂၀၂၀ တုန်းကပြသခဲ့ပြီး လူကြိုက်များအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ သူနာပြုကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းကအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာရနေတဲ့ နာမည်ကျော်စာရေးဆရာမတို့ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
8. Legend of the Blue Sea (Jun Ji Hyun & Lee Min Ho)
၂၀၁၆-၁၇ တုန်းက ထွက်ခဲ့ပြီး ဂျိုဆွန်းခေတ်ကတည်းက ရေစက်ပါလာခဲ့တဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ရေသူမလေးကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကို ရိုက်ကူးပြသထားပါတယ်။
7. My Love from the Star (Ji Hyun & Kim Soo Hyun)
၂၀၁၃-၁၄ က ပြသခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး ဂျိုဆွန်းခေတ်ကတည်းက ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဂြိုဟ်သားနဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်​ယောက်ကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ။
6. Fight For My Way (Park Seo Joon & Kim Ji Won)
၂၀၁၇ တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ မိမိတို့ဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက် ကြိုးစားနေတဲ့သူငယ်ချင်းအုပ်စုထဲက အလွတ်တန်းနပန်းချတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ announcer တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သူကောင်မလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
5. What’s Wrong with Secretary Kim (Park Seo Joon & Park Min Young)
၂၀၁၈ က ထွက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး အတ္တကြီးတဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့ သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာ ၉ နှစ်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွင်းရေးမှူးကောင်မလေးကြားက အချစ်ပုံပြင်လေးပါပဲ။
4. Crash Landing on You (Hyun Bin & Son Ye Jin)
၂၀၁၉-၂၀ မှာ ထွက်ခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ချမ်းသာတဲ့အမွေဆက်ခံသူအမျိုးသမီးနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားက ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ အချစ်နဲ့ဟာသ ရောစပ်ပြီး ကြည့်လို့ကောင်းတာကြောင့် ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
3. Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo (Lee Sung Kyung & Nam Joo Hyuk)
၂၀၁၆-၁၇ တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချစ်ဇာတ်လမ်း​လေးပါ။ အလေးမချန်ပီယံကောင်မလေးနဲ့ ရေကူးအားကစားအထူးပြုကျောင်းသားကြားက လူငယ်ဆန်ဆန်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
2. Strong Woman Do Bong-Soon (Park Bo Young & Park Hyung Sik)
၂၀၁၇ တုန်းက ထွက်ခဲ့ပြီး အင်အားကြီးမားတဲ့သဘာဝအစွမ်းပိုင်ရှင် ကောင်မသေးသေးလေးကို အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဂိမ်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက သက်တော်စောင့်အဖြစ်ငှားလိုက်ပြီးနောက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ မင်မင်နဲ့ဘုံဘုံ အတွဲဆိုပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကို များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။
1. Mr. Queen (Shin Hye Sun & Kim Jung Hyun)
၂၀၂၀-၂၁ တုန်းကပြသခဲ့ပြီး မျက်မှောက်ခေတ် နာမည်ကြီးတဲ့အမျိုးသားစားဖိုမှူးတစ်ယောက်ဟာ မတော်တဆ တိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကျခဲ့ပြီးနောက်.ပြန်ပြီးသတိရလာတဲ့အခါမှာ ဂျိုဆွန်းခေတ်က မိဖုရားခေါင်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ တော်ဝင်မိဖုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဝိဉာဥ်ပိတ်မိနေတာကြောင့် လက်ရှိခေတ်ကိုပြန်လာဖို့အမျိုးမျိုးကြံစည်ရင်း ဘုရင်ကြီးနဲ့ သံယောဇဥ်ရှိသွားတဲ့အကြောင်းကို ဟာသကော အချစ်ပါ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အားပေးကြည့်ရှုသူအများအပြား ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
Next Song Joong Ki နဲ့ Suzy တို့ JTBC ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာ တွဲဖက်သရုပ်​ဆောင်မယ်လို့ သတင်းများထွက်​ပေါ်​နေ »
Previous « GOT7’s Jinyoung အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချောဆုံး၊ အခန့်ဆုံးလို့ ထင်မိတဲ့အချိန်က ဘယ်အချိန်များလဲ...